Hostels vangave vasina frills kuti mumahotera kupa. Saka pangava pasina kofi Machine mukati mumba mako, Aihwa sipo dzemahara, kana yako firiji. Hamungafi kunyange kuwana vakasununguka matauro. Asi vamwe hostels chaizvoizvo tengesa sipo nezvimwe zvinodiwa pane kokupata mutengo. uye chokwadi, iwe pamwe havazofaniri pachako kumurimi yako kana kabati mu vaiudza mumakamuri, asi vane lockers apo unogona kuchengeta zvinhu zvenyu. Unogona kuva kuunza yako Padlock zvazvo. Kana bhegi rako rakakurisa uye pashure Checkout, uchiri kuda kuita zvimwe pakupedzisira yemaminitsi dzinoyevedza, unogona kusiya bhegi rako panguva penhumbi kuchitoro.
Zvakanaka, chokwadi, iwe pamwe musingadi kuwana chete toga zvawaizoita imwe hotera. Kune nzvimbo zvaiita akafanana zvimbudzi, dzekubikira, Lounge nzvimbo, uye nzvimbo dzekushandira. zvisinei, iri nzira yakanaka yokuti kusangana vanhu. Kana kutamba ari zvaiita munzvimbo unogona kusangana vafambi vanobva munyika yose. Uye kunyange kutanga ushamwari hunogutsa nevanhu vaunosangana navo yako nzendo uye zvitsva kumadhindindi ramangwana pakufamba, wo! Vanhu vanoshanda mu hostels kazhinji kunonakidza uye fara nevamwe vanhu, saka zvakanaka pakuvhenganisa uye kushamwaridzana navo, naizvo.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#hostel	#hostels	traveltips